Kedu ihe na-ebute ọbara mgbali elu: ihe a na-atụghị anya ya na ihe dị ịtụnanya - Osisi vaịn 2022
Kedu ihe na-ebute ọbara mgbali elu: ihe a na-atụghị anya ya na ihe dị ịtụnanya
10 nkịtị & 3 na-adịghị ahụkebe
Ihe dị ka nde ndị okenye 78 na United States nwere ọbara mgbali elu, American Heart Association na-agwa anyị, na-eduga ná nsogbu ahụike, mgbe a na-achịkwaghị ya ogologo oge, gụnyere ọrịa strok. Gburugburu ụwa, nrụgide dị elu, nke a makwaara dị ka ọbara mgbali elu, na-akpata ihe dị ka nde mmadụ 7.5 site na atụmatụ Healthtù Ahụ Ike Ụwa, nke ruru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 13 nke ọnwụ nile.
Ọ bụ ezie na ị nwerelarị ọbara mgbali elu gị (ma nwee ike icheta ọnụọgụgụ), ihe ị nwere ike ịmaghị bụ ihe ọnụọgụ ndị ahụ pụtara kpọmkwem na ihe mejupụtara ma ọkwa nkịtị na nke dị elu. Ọbara na-ebuga oxygen n'ahụ gị ka ọ na-aga n'okporo ụzọ awara awara na akwara. Oge ọ bụla obi na-akụ, ọ na-agbanye ọbara n'okporo ụzọ awara awara nke nwere ụdị tube nke anụ ahụ, netwọk gụnyere arịa ọbara na capillaries. N'ihi ya, ọ̀tụ̀tụ̀ ọbara ji erugharị bụ ihe e ji atụ ike abụọ na-etinye mgbe ọbara na-agba n'ahụ́ mgbidi akwara. Ike nke mbụ na-eme ka ọbara na-esi n'obi na-awụsa n'ime akwara, ebe nke abụọ na-apụta mgbe obi na-ezu ike n'etiti iti.
"Systolic" bụ nha ike ọbara mgbe obi na-akụ, ebe "diastolic" bụ nha ike mgbe obi na-ezu ike. Systolic bụ ọnụọgụ kachasị elu, nke dị elu karịa ọnụọgụ abụọ a na-egosipụtakarị n'ụdị nha ma kwuo n'olu dara ụda dịka ọmụmaatụ, "120 n'elu 80." Lee chaatị dị n'okpuru maka ọkwa nkịtị na nke dị elu.
Ọ bụrụ na ike nke nrịba ọbara dị elu, mgbidi akwara na-agbatị ma mebie, na-eme ka adịghị ike na arịa ọbara. N'aka nke ya, adịghị ike a pụtara na arịa ndị ahụ na-adịkarị mfe mgbawa ma ọ bụ obere anya mmiri na-ahapụ anụ ahụ na mgbidi nke akwara na veins, na-abawanye ohere nke nkwụsị. N'ikpeazụ, ihe ndị a dị iche iche nwere ike ịkpata obi mgbawa, aneurisms, ọrịa strok, na ọbụna nkụchi obi.
Yabụ kedu ihe na-ebute ọbara mgbali elu? Ịbụ oke ibu na enweghị mmega ahụ n'ọkwa n'etiti azịza 10 kacha elu nke American Heart Association nyere. Nri nke nwere oke calorie, abụba na shuga ga-abụ ihe ọzọ a na-akpọkarị, ebe oke nnu ga-abụrịrị ụdị dị iche iche n'ihi na oke sodium na-emerụ ahụ maka ọbara mgbali elu. Ihe kpatara nke ise na isii ga-abụ oke mmanya na sịga - ọzọ nne gị kwuru eziokwu. Na-akawanye nká, akụkọ ihe mere eme ezinụlọ nke ọbara mgbali elu, na agbụrụ / agbụrụ niile na-abanye na foto a: Ihe karịrị pasent 40 nke ndị Africa-America nwere ọbara mgbali elu. Otu ihe kpatara ya ga-abụ okike. Ọtụtụ ụmụ nwoke karịa ụmụ nwanyị nwere ọbara mgbali elu ruo afọ 45; n'etiti 45 na 64 ọnụ ọgụgụ ahụ bụ otu, na mgbe afọ 65 gasịrị, ọtụtụ ụmụ nwanyị karịa ndị nwoke ga-enwe ọbara mgbali elu.
Ọ bụ ezie na ndị a bụ azịza ndị bụ́ isi, e nwekwara ihe ole na ole pụrụ iche mere ọ̀tụ̀tụ̀ ọ̀tụ̀tụ̀ ọbara ji erugharị erugharị nwere ike isi debanye aha dị elu. Nke mbụ ga-abụ na-ekwu okwu na ekwentị mkpanaaka gị mgbe cuff dị n'aka gị. Dị ka nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya, achọpụtara ịkpọ oku ekwentị na-eme ka ọ̀tụ̀tụ̀ ọbara ji erugharị ozugbo n'etiti ndị sonyere ya. N'ezie, naanị ikwu okwu mgbe a na-enyocha ọbara mgbali gị nwere ike ime ka nsonaazụ ya dị njọ, n'ihi ya, ndị nchọpụta na-ekwu na ọ ga-akara gị mma idegara mmadụ ozi n'ekwe ntị.
Ihe ọzọ dị egwu kpatara ọbara mgbali elu bụ ọnụnọ dị mfe nke dọkịta. Nnyocha e mere na Mahadum Exeter Medical School chọpụtara na ndekọ ndị dọkịta na-ede dị elu karịa mgbe ndị nọọsụ nwalere otu ndị ọrịa ahụ. Ọ bụ ezie na a chọpụtala "mmetụta uwe na-acha ọcha" na mbụ, nchọpụta a kachasị ọhụrụ banyere ihe omume ahụ bụ nke zuru oke, na-agafe mba 10 na ọtụtụ narị ndị ọrịa.
N'ikpeazụ, ọgwụ, gụnyere ndị na-ebelata ihe mgbu na-ere ahịa, nwere ike ime ka nrụgide gị dịkwuo elu. Achọpụtara ihe niile sitere na ọgwụ mgbochi na ọgwụ mgbochi ịda mbà n'obi, site na nje nje bacteria na ibuprofen na-eme ka nrụgide dịkwuo elu na nyocha nke ndị nchọpụta na Mahadum Tel Aviv mere n'oge na-adịbeghị anya. Ebe ọ bụ na ihe ize ndụ a dị, ndị ọrịa ga-abụ ihe amamihe dị na ya inyocha ọgwụ ha na-aṅụ ma na-aṅụ nanị ọgwụ ndị ha na-achọsi ike iji nọgide na-enwe ezi ahụ ike.
Yabụ kedu ozi dị n'azụ ngụgharị a nke ma ndị nkịtị na ihe dị egwu kpatara nrụgide gị nwere ike ịdị elu? Ọfọn, nke mbụ, ọ dị mkpa ịmara na ọbara mgbali elu ekwesịghị ịgụ naanị otu ugboro; onye ọ bụla nwere ike ịnwe ọrịre nke nwa oge na nke na-adịghị ahụkebe n'ihi ihe pụrụ iche, gụnyere dọkịta na-ezo ma ọ bụ mgbanaka ekwentị na mberede, yabụ ọ kacha mma ịgụ akwụkwọ ugboro ugboro wee nyochaa usoro a n'ezie. Nke abuo, ị kwesịkwara ịtụle ọbara mgbali elu dị ka ọnụ ọgụgụ ahụike nkeonwe nke kwesịrị ka ọ bụghị dọkịta gị nyochaa kama ọ bụ gị. Ịgụ ihe mgbe ị bụ nwata na ahụike na-arụ ọrụ dị ka ezigbo akara. Mgbe e mesịrị, ka ị na-aka nká, ị nwere ike ịmalite ime mgbanwe na nri gị na mgbatị ahụ iji mee ka ọnụ ọgụgụ ndị ahụ dị ntakịrị dị ka o kwere mee. Ahụike dabere na gị nke ukwuu.